Imtixaannada aan culeyska lahayn ee COVID-19 ee loogu talagalay Dalxiisayaasha booqanaya Socdaalka Serengeti
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Tansaaniya » Imtixaannada aan culeyska lahayn ee COVID-19 ee loogu talagalay Dalxiisayaasha booqanaya Socdaalka Serengeti
Safarka Dalxiiska • Jebinta Wararka Caalamka • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Ururka Wada-hawlgalayaasha Dalxiiska Tansaaniya (TATO) ayaa ka sameeyay xarun cusub ururinta muunadda COVID-19 aagga Kogatende si loogu diyaar garoobo xilliga hijrada ee Serengeti.
Beerta Qaranka Serengeti waxay hadda leedahay laba xarumood oo tijaabo ah oo lagu qaado COVID-19, midna Seronera, iyo mid kale oo ku yaal Kogatende oo loogu diyaar garoobayo socdaalka Serengeti.
Qiyaastii 700,000 oo dalxiisayaal ah ayaa booqda wareegga dalxiiska woqooyiga Tansaaniya sannad walba si ay u soo arkaan guuritaanka ugu weyn ee duurjoogta
Sannad kasta inta udhaxeysa Luulyo iyo Oktoobar, malaayiin wildebeest ah ayaa waxaa wada isla qaafiyaddii hore si ay u gutaan kaalintooda dabiiciga ah ee wareegga nolosha ee aan laga maarmi karin.
“TATO oo kaashaneysa dowladda iyada oo loo sii marinayo taageerada UNDP waxay jeceshahay in aan ku dhawaaqno in aan diyaarinay xarun cusub oo aruurinta muunadda COVID-19 oo ku taal Kogatende, Waqooyiga Serengeti, dadaalka aan ugu jirno in aan dalxiiseyaasheena ugu soo bandhigno imtixaan dhib la’aan ah inta lagu guda jiro xilliga hijriga ugaarsiga oo hadda socda, ”ayuu yiri Guddoomiyaha TATO, Wilbard Chambulo.
Xubnaha TATO waxay yiraahdeen tani waa nasasho nasasho ah oo loogu talagalay dalxiisayaasha doonaya inay arkaan xilliga u gudubka socdaalka wabiga Mara inta u dhexeysa bilaha Luulyo iyo Oktoobar oo ugaadha ka imanaya Maasai Mara Game Reserve oo tagaya Waqooyiga Serengeti ee Tansaaniya.
Xadiiqadda qaran ee Tansaaniya ee Serengeti waxay hadda leedahay laba xarumood oo tijaabo ah oo laga qaado tijaabada COVID-19, mid ku taal Seronera, wadnaha beerta, iyo mid kale oo ku taal Kogatende, qaybta woqooyi ee Serengeti, oo u dhow Mara caanka ah ee Mara.
Fikradda TATO waa inay hubiso khibrad safari aan xaddid lahayn oo loogu talagalay dhammaan dalxiisayaasha qorsheynaya safarka safarka ee Seeraha Qaranka Serengeti ee Tansaaniya sannadkan.
“Iyadoo la raacayo nidaamyo nadaafadeed oo ka socda kooxdeena iyo la-hawlgalayaashayada hoyga, xarumaha caafimaadka ee Serengeti waxay hubin doonaan carqalad yar oo ku timaadda goobaha dalxiisayaasha iyada oo la hubin doono u hoggaansanaanta diyaaradaha iyo xeerarka caalamiga ah,” ayuu yiri Mr. Chambulo.
Beerta Qaranka Serengeti waxay ku taal waqooyiga Tanzania inta u dhexeysa harada Victoria iyo Bariga Afrika Rift Valley. Waxaa la aasaasay sanadkii 1929 waxaana la balaariyay sanadkii 1940 si loo ilaaliyo 5,600 mayl laba jibaaran (14,500 sq. Km) oo ah deegaanka deegaanka Serengeti.
Beertan ayaa taageerta in ka badan 94 nooc oo naasley ah, 400 nooc oo shimbiro ah, waxaana ku jira kumanaan duurjoog ah.
Socdaalka ugu weyn ee duurjoogta ee haray - wareegga sanadlaha ah ee 2 milyan oo duurjoogta ah oo ku baahsan Serengeti iyo Maasai Mara kaydka - waa u soo jiidashada dalxiiska ee muhiimka ah, oo soo saarta malaayiin doollar sanadkiiba.